Vaovao - Beijing dia mandray anjara amin'ny Fihaonana an-tampony isan-taona ny fitsaboana ara-pahasalamana any Sina
(Famintinana famaritana) Lu Lin, izay tale jeneralin'ny orinasa, dia nasaina handray anjara amin'ny fihaonana an-tampon'ny isan-taona ny kojakoja ara-pitsaboana sinoa any Beijing ny 6 Mey 2019. Niady hevitra tamin'ny orinasa sy ny orinasa mitarika ny indostrian'ny Oniversiten'i Donghua momba ny fironan'ny kojakoja ara-pitsaboana amin'ny ho avy izy ireo. Sina sy ireo fitaovana vaovao tsy tenona. Fampiharana amin'ny sehatry ny fitsaboana.
Lu Lin, CEO an'ny orinasa, dia nasaina handray anjara amin'ny fihaonana an-tampon'ny isan-taona ny kojakoja ara-pitsaboana sinoa any Beijing ny 6 Mey 2019. Niady hevitra tamin'ny orinasa mpanabe sy mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Donghua University momba ny fironana amin'ny kojakoja ara-pitsaboana any Chine sy ny vaovao izy fitaovana tsy tenona. Fampiharana amin'ny sehatry ny fitsaboana.
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile Saron-tava fandidiana ambaratonga 3, Saron-tava 3 azo ampiasaina miaraka amin'ny Fda, Saron-tava fandidiana 3ply, Saron-tava Ffp3, Saron-tava tsy miendrika 3 Ply, Saron-tava azo ampiasaina 3ply,